Ukushintsha kwesimo sezulu kubathinta kanjani abantu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquguquka kwesimo sezulu kwanamuhla yinkinga enkulu kunazo zonke isintu esike sabhekana nayo esikhathini eside. Ukukhishwa kwegesi ephezulu yokubamba ukushisa, ukungcola, ukugawulwa kwamahlathi kanye nokusetshenziswa budedengu kwezinsizakusebenza kubangela ukuthi isimo sezulu singazinzi.
Kuyinkinga enkulu. Sazise ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kubathinta kanjani abantu.
1 Ukukhuphuka kwamazinga olwandle
2 Ukuhlasela kwezilokazane ezishisayo
3 Ukushoda kokudla
IKiribati, izwe lokuqala ukubhujiswa ukuguquka kwesimo sezulu.
Njengoba iplanethi ifudumala, iqhwa elisezibondeni liyancibilika futhi liphelele olwandle, okwenza izinga linyuke. Ngokwenza kanjalo, abantu abahlala eziqhingini eziphansi noma osebeni kuzodingeka bathuthele kwezinye izifunda ukuze bazivikele.
Elinye lamacala aphawuleka kakhulu ngeleKiribati. Lesi siqhingi, esisenkabeni yePacific esentshonalanga, ingacwiliswa ngaphambi kokuphela kwekhulu, njengoba sishilo kubhulogi.
Ukuhlasela kwezilokazane ezishisayo
Umiyane wehlosi, odabuka eningizimu-mpumalanga ye-Asia, ukwazile ukufinyelela ezingxenyeni eziningi zeYurophu neMelika.
Amazinga okushisa aya ngokwanda engxenyeni enkulu yomhlaba, ngalokho izinambuzane zasezindaweni ezishisayo ezibangela izifo, njengomiyane wengwe, zingafinyelela ezifundeni lapho zazingakwazi khona ngaphambilini ukubeka impilo yabantu engcupheni.
Isomiso sizoba namandla kakhulu ezingxenyeni eziningi zomhlaba, njengeSpain.
Ezingxenyeni eziningi zomhlaba, njengeSpain, kuzoba nzima kakhulu ukulima ngenxa yesomiso. Amazinga okushisa aphezulu nemvula ephansi izodala ukuguguleka kwenhlabathi, ngakho-ke izitshalo zizoba nenkinga ekukhuleni, futhi kube nenkinga enkulu kakhulu yokuthela izithelo ngaphandle kokuthi ama-hybrids amelana nalezi zimo adaliwe.
Okufanele ngikwenze? Eqinisweni, singenza izinto eziningi ukunciphisa ukuguquka kwesimo sezulu. Izenzo ezinjengokucima ilambu lapho singaludingi, ukugwema ukusebenzisa izimoto noma ukusebenzisa kakhulu uhambo, ukuvuselela noma ukutshala izihlahla yizenzo ezincane ezingahamba ibanga elide.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kubathinta kanjani abantu